अर्को मृत्युको कथा [आफ्नै आवाजमा] – Krishna Thapa
आज मैले आफ्नै आवाजमा कथावाचन पोडकास्ट गरेको छु, कस्तो लाग्यो सुन्नु होला ।
(यस कथाका घटना तथा पात्रहरु लेखकको कल्पनामा आधारित छन , कसैसँग मिल्न गएमा त्यो केवल संयोग मात्र हुनेछ।)
डिसेम्बरको अन्तिम साता, रियाद शहरमा नयाँ बर्षको रौनक पुरै छाई सकेको थियो तर बाहिरको यो रौनकतासँग विल्कुल अनभिज्ञ थियो उ केही बर्ष देखि ।
कारागारको झ्यालबाट उसले फेरी एकपटक बाहिरको संसार चियाउने असफल चेष्टा गर्यो । बिहान उघ्रिसकेको थिएन, यता उता गरिरहेका कालजस्ता अरबी सैनिकहरु, काँडेतार सिउरिएका अग्ला पर्खाल र त्यसमाथिको धमिलो क्षितिज बाहेक उसले अरु केही देख्न सकेन ।
रियाददेखि २५ माइल दक्षिणमा अवस्थित अल हायर बन्दीगृहका भित्ताहरुमा कैद भएर सास फेरिरहंदा उ धेरै पटक आफै सँग प्रश्न गर्छ – यसरी शरीरमात्र बाँचिदिनुको के अर्थ छ जीवनमा ?
चारबर्ष अघि उसलाई यहाँ ल्याउदा उसले भेटेका कैदीहरु पनि आज कोही साथमा थिएनन जो सँग उनीहरु एक आपसमा आफूले गरेका अपराधका कथाहरु सुनाएर दिन बिताउन सकुन । त्यसबेला उसले अरु कथाहरु पनि सुन्न पाएको थियो । कैदीलाइ दिईने ‘राजकीय आम माफीका कुरा’ उसलाई सबै भन्दा धेरै सुन्न मन लाग्ने प्रसंगहरु हुन्थे, तर यतिखेर उ ‘ 2003 मा यही झ्यालखाना जलेको इतिहास सोचिरहेछ – जुनबेला धेरै कैदीहरु आगोले जलेर जेलभित्रै मरेका थिए ।
हजारौं सपना सहित खुल्ला आकाशमा स्वतन्त्र भएर उडेका कल्पनाहरु आउनै छाडेका थिए । तर छातीभित्र कतै शेष रहेको जिजिविषाले भने बेलाबेला पत्नी, छोराछोरी र घर सम्झाईरहन्थ्यो र भविष्य सोच्न बाध्य बनाउथ्यो ।
मलाइ देख्ने बित्तिकै उसका आँखाहरु विस्फारित भए,
‘अदालतले मेरो बारे कस्तो निर्णय गर्यो ? के सुनुवाई भयो ?’
यो प्रश्न सोध्दा उसका ओठहरु लुगलुग काँपिरहेका थिए । अनुहार भरी भय र त्रासको बादल मडारिएको थियो । उ निकै आत्तिएको थियो ।
मैले भनिन कि ‘ हेर, तिमीलाई मृत्युदण्ड दिईयो, तरवारले काटेर तिम्रो शरीरबाट शिर अलग गराउने आदेश भएको छ । अब केही दिनमै यहाँको कानुनले तिम्रो पनि हत्या गर्नेछ र इहलिला समाप्त गरिदिनेछ ।’ मैले यति भने – ‘ चिन्ता नलिउ, केही भएको छैन, सबै ठिक हुन्छ ।’
उ एउटा हत्यारा हो, एकजना विदेशीको हत्या गरेको अभियोगमा यहाँ कैद भएको थियो । यद्यपि मेरो मनमा असंख्य दया र सहानुभूतिका भावहरु उर्लिरहेका थिए । स्वदेशी भएको नाताले हो या यो कारणले कि केही दिनभित्रै सजायको नाउँमा अब उसको पनि हत्या गरिनेछ ।
उ भनिरहेको थियो – ‘मैले प्रत्याक्रमण मात्र गरेको हुँ, के थाहा त्यसको ज्यानै जाला भनेर ?’ शायद उ ढाँटिरहेको पनि हुनसक्थ्यो ।’ भन्दै थियो – ‘ यो घटना मेरो हातबाट त्यो स्थितिमा पुगेपछि भयो जहाँ या त मैले उसलाई सिध्याउनु पर्थ्यो या त उसले मलाइ मार्न सक्थ्यो, मैले पहिलो बाटो रोजें ।
अस्ताउने बेला नभई घाम लुकेजस्तो आकाशमा अन्धमुष्टि कालो बादल छाएको थियो । बर्षा हुने सम्भावना बढेकोले म छिटो फर्कनु थियो ।
“लाग्छ मलाइ मृत्युदण्डको सजाय भैसकेको छ तर तपाईं ढाटिरहनु भएको छ । भनिदिनुस न मलाइ अब के गर्ने भए अरबीहरुले ?
यो प्रश्न सोधी सक्दा उसको आँखामा आसुँ टिलपिलाएका थिए, तैपनि रुन्चे स्वरमा उ भनिरहेको थियो – ‘अब मलाइ मर्नु सँग डर छैन, त्यसै पनि म अहिले यहाँ के बाचेको छु र ?
‘यदि मलाइ डर छ भने मेरो मृत्युको समाचार सँग मात्र छ, जुन समाचार म मरेपछि मेरो साथीभाइ र मैले यसअघि बाँचेको समाजमा फैलनेछ । मानिसहरुले भन्ने छन एउटा अपराधीको टाउको काटियो।’ उसको मुहारमा अब जीवनको कुनै कान्ति थिएन । मृत्युदण्डको खबरसँग अनभिज्ञ भएपनि यस्तो लाग्थ्यो उसलाई यो आभास भैसकेको छ कि उ मृत्युको ज्यादै नजिक पुगिसकेको छ ।
फराकिलो सडक र फुटपाथहरु …घर फर्कदा देख्छु – कालो बुर्का भित्र आफ्नो यौवन र सुन्दरतालाई छोपेर हिड्ने आँखाहरुलाइ टाइट जिन्स र स्कर्टमा सजिएका युवतीहरुले चुनौती दिन थालिसकेका छन । पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव र वहाव यहाँका गल्ली गल्लीहरुमा बग्न थालेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । तर ‘मान्छे मार्ने कानुन’ यहाँ अझै किन बाचिरहेको छ ?
जीवन र मृत्युलाई नश्वर देहसँग जोडेर मात्र नहेरौं । म यतिखेर फ्रान्सेली चिन्तक रोलाँ बार्थलाई सम्झन्छु, जसले लेखकको मृत्युको घोषणा गरेर साहित्यिक समालोचना र सिद्धान्तमा चर्को बहस निम्त्याईदिएका थिए । उनको आशय थियो, लेखकको रचनामा आफ्नो स्वार्थभन्दा पाठकको स्वार्थ या बोध महत्वपूर्ण हुन्छ। पाठकको बुझाइमा निर्भर हुने हुँदा आफ्नो सिर्जना पस्किसकेपछि लेखकको मृत्यु हुन्छ र पाठकको जन्म । तर उनले उल्लेख गरेको मृत्युको बयानलाइ यो टिप्पणीले पुग्दैन ।
जिउँदो हुनु चेतना हो, अरुले उसको विचार र चेतना अस्तित्वको रुपमा स्वीकार गर्नु, महसुस गर्नु हो । उसका भावनाहरु आत्मसात गर्नु हो र उसलाई छ भनेर सम्झनु हो । जसरी बर्षौं अघि नै मरेका शहिदहरु हामीभित्र आजपर्यन्त बाँची रहेका छन ।
बाहिर आँगनमा पानी दर्कन थालिसकेको थियो, मेरो मनमा भने अझै उसले बोलेका वाणीहरु दर्किरहेका थिए — ‘दाइ, म त उहिल्यै मरिसकेको छु, जिउनुको सबै उत्साह र रहरहरुको हत्या भैसकेको छ यहाँ । यो अग्लो पर्खाल भित्र थुनिएको कैदी होइन म एउटा लाश बाचिरहेको छु । बरु छिटै होस् मलाइ मृत्युदण्डको घोषणा … । दुख यसमा छ कि पराइ देशमा पराइको हातबाट मर्ने भएँ र सधैं अपराधी कहलिने भएँ । बिन्ती – यदि यस्तै भयो भने ढाकछोप गरेर लेखिदिनु है — मेरो मृत्युको खबर ।’
उसलाई मृत्युदण्ड दिईने समय अनिश्चित थियो, मृतकका परिवारले ‘ब्लड मनी’ स्वीकार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो । मृत्युदण्ड पाइसकेको त्यो व्यक्तिमा पनि एउटै चिन्ता थियो, कि आफू मरिसकेपछि अरुले कसरी सम्झने हुन?
यो अरब भूमिमा असंख्य परदेशीका मृत्युका कथाहरु पुरिएका छन, यो आकाशबाट धेरै निस्प्राण शरीरहरु काठको वाकसमा कैद भएर उडेका छन ।
तर कथाले यस्तरी मोड लियो कि म आफै अचम्मित भएँ । अचानक जेलभित्रै उसको प्राण पखेरु उडेर गयो, एउटा रहस्यमय मृत्यु … । राति सद्दे सुतेको मान्छे बिहान उठ्दा मरिसकेको थियो । उसको त्यो मृत्यु हत्या, आत्महत्या वा स्वाभाविक मृत्यु कुनै पनि थिएन । कुनै लक्षण नै नदेखाई अचानक मुटुका मांशपेशिहरुले काम गर्न नसकेर रक्तसंचार बन्द भई हुने यस्तो अज्ञात मृत्युलाई ‘आकस्मिक निधन’ भनिन्छ । मृत्युको कारणमा ‘Sudden Cardiac Arrest’ लेखेर अस्पतालका डाक्टरहरुले उसको मृत्युको घोषणा गरिसकेका थिए ।
अब उसको मृत्युलाई म कसरी लेखुँ?
गुगलको पैसा – दश डलर टार्गेट
la dami6mero dada ko katha
Sita Baral says:
Krishna Thapa jii ko katha marmik r wastbik hunchhan…. jhan woha ko aafnai swor la katha ajhai wojilo banako chha…. Keep it up
Ram Krishna Rijal says:
Krishna jii ko bastabik katha ramro cha tapae hame jasta hajarau nepale haru aafnai desh ma abasar huda hudai pani badyata ma bedesenu pare ko cha k garne krishna thapa jee tapae ko yo saetek rachana lae muri muri suvakamana…….
rai alone says:
krishna sir i proud of you best wishes to you …..